Thenga i-S4 (Andarine) ipowder (401900-40-1) hplc =98% | AASraw
I-S4 (Andarine) ipowder
/ iimveliso / SARMS / S4 (Andarine) powder
SKU: 401900-40-1. Udidi: SARMS
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-S4 (Andarine) powder (401900-40-1), phantsi komgaqo we-CGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-S4 (Andarine) ividiyo ye powder
I-S4 (Andarine) ipowder Abalinganiswa basisiseko
igama: I-S4 (Andarine) ipowder
I-molecular Formula: C19H18F3N3O6
Isisindo somzimba: 441.36
umbala: powdalline powder
I-S4 (Andarine) ukusetyenziswa kwepowder kumjikelezo we-steroids
I-S4 powder okanye i-Andarine powder (i-CAS 401900-40-1).
Ukusetyenziswa kwe-Raw Andarine
S-4 kufuneka ithathwe kwi-50mg-75mg, iintsuku ze-5 ngeveki, kwiiveki ze-12-16. Njengoko kushiwo ngaphambili, i-S-4 ayidingi ukuba ithathwe kwii-3 izihlandlo ezahlukileyo kulo lonke usuku; kodwa kubantu abakhetha le ndlela, i-dose ye-25mg (malunga nesiqingatha se-milliliter) isinconywa kanye kunye nesidlo ngasinye sesithathu.
I-dose ephakanyisiweyo yokusika i-50 mg yeeyure ze-6-8. Umele ulisebenzise yonke imihla uze uthathe iintsuku ze-2 ukuhamba ixesha. Ukuthatha i-Andarine powder imihla ngemihla ubude bomjikelezo bukhokelela ekutshintsheni kwamehlo.
Isilumkiso kwi-S4 (Andarine) ipowder
I-S-4 kunye nezinye i-SARM ziye zaziwa ngenxa yokudakumba kubantu abaninzi. Oku kuye kwafunyanwa njengento eninzi yengxaki yengqondo, ingxaki yokuphila. Abaphandi abanemicebe ehluphekayo naluphi na ukuphazamiseka kwengqondo kufuneka baqaphele xa besebenzisa le khemikhali.
Izinzuzo ze-S4 xa kuthelekiswa neSteroids / Prohormones
(1) Ubuninzi be-S4 Ubunzima abuyiyo into enobuthi kwaye abukho miphumo emibi kwisibindi, uxinzelelo lwegazi okanye ezinye izitho zangaphakathi.
(2) Ayikho inqanaba elipheleleyo le-post okanye unyango olufunekayo (ngokuqhelekileyo kuphela iiveki ze-2-3).
(3) Abaphandi baya kuba nempembelelo enkulu kakhulu xa behlala kwi-Powder ye-S4.
(4) Akukho mfuneko ebalulekileyo yexesha eliphakathi kweevili.
(5) Ubuninzi be-S4 Powder inikeza i-steroid njengeziphumo ngaphandle kwe-steroid njengemiphumo emibi.
I-Andarine Raw Powder (CAS 401900-40-1)
Andarine powder Ukuthengisa
Indlela yokuthenga i-S4 powder: Thenga i-Andarine powder (i-CAS 401900-40-1) esuka kwi-AASraw
I-AASraw inikezela ubumsulwa 98% S4 / Andarine powder oluhlaza kumalungu omzimba okanye iilabhu zangaphantsi zokusetyenziswa kwe-anabolic.
I-Raw S4 Powder Recipes:
Thenga i-S4 (i-Andarine) I-Powder Online | Yonke into ofuna ukuyifumana